Nhau - Yakagadzirwazve Polyester Fibers
Polyester is a manmade fiber, inogadzirwa kubva kune petrochemical zvigadzirwa neyakaitwa inonzi polymerization. Iine 49% yeiyo yepasi rose kugadzirwa kwefibre, polyester ndiyo yakanyanya kushandiswa fiber mune yechipfeko chikamu, pagore zvinopfuura mamirioni mazana matanhatu emakumi matatu ematani e polyester fiber inogadzirwa. Iyo nzira inoshandiswa kudzokorodza inogona kunge iri michina kana kemikari, ine feedstock inoumbwa neye pre- kana post-mutengi marara ayo asingachagone kushandiswa kuchinangwa chayo chakanangwa. PET inoshandiswa sechinhu chisina kugadzirwa chezve polyester yakadzokororwa. Izvi zvinoshandiswa zvakare mumabhodhoro emvura epurasitiki akajeka, uye kuigadzirisazve kuti isvike kumucheka inodzivirira kubva pakuenda kunorasirwa marara. Hembe dzakaburitswa kubva ku polyester yakadzokororwa dzinogona kudzokororwazve uye pasina kudzikisirwa kwehunhu, zvichirega kudzora kupambadza, zvinoreva kuti anogadzira mbatya anogona kuzove akavhara chiuno, polyester inogona kushandiswazve nekushandiswazve.
Musika wepasirese wakagadziriswa zvekare wePolyester Fibers unotarisa mukubatanidza humbowo hukuru hwehuwandu hweRekisheni yePolyester Fibers indasitiri sezvo ichipa vaverengi vedu kuwedzera kwekuvatungamira mukusangana nezvipingaidzo zvakakomberedza musika. Kuwedzeredzwa kwakazara kwezvinhu zvakati wandei sekuparadzirwa kwepasirese, vagadziri, saizi yemusika, uye zvinhu zvemusika zvinokanganisa zvipo zvepasirese zvinotaurwa muchidzidzo. Pamusoro pezvo iyo Yakagadziriswazve Polyester Fibers kudzidza zvakare inoshandura kutarisisa kwayo neakadzika makwikwi enzvimbo, yakatsanangurwa mikana yekukura, chikamu chemusika chakabatana pamwe nechigadzirwa mhando uye zvinoshandiswa, makambani akakosha anoona nezvekugadzirwa, uye nzira dzakashandiswa dzinozivikanwa.